Wafdi ka socda Dawlada Turkiga Oo Kusoo wajahan Muqdisho – XAMAR POST
Wafdi ka socda Dawlada Turkiga Oo Kusoo wajahan Muqdisho
Ilo lagu kalsoon yahay Ayaa sheegay in Isbuucyada soo socda Muqdisho kusoo wajahan yahay wafdi heerkiisu sareeyo oo ka socda Dalka Turkiga.
Waxa la sheegay in Wafdigaan hogaamin doono Wasiirka Arimaha Dibada Dalkaasi Meflaat Kafashoqlu,waxaana wehlin doona xubno Saraakiil ciidan ah iyo Xildhibaano Dawlada Turkiga Baarlamaankeeda katirsan.
Marka ay Muqdisho Yimaadaan ayey kormeeri doonaan Saldhiga TURKISOM Ee Tababarka Ciidamada Soomaaliyeed lagu siiyo iyo safaarada ay ku leeyihiin Degmada Cabdi Casiis.
Wakaalada Wararka Anadolu ayaa heshay Xog ah in Kulamo gaar gaar ah Wafdigaan la qaadan doonaan Mas’uuliyiin katirsan Dawlada Soomaaliya oo ay kala hadli doonaan Arimaha iskaashiga Ciidan iyo Xoojinta xiriirka Labada Dal sidii kor loogu sii qaadi lahaa.
Tan iyo 2011-kii oo haatan laga joogo 10 sano Turkiga ayaa galaan gal dhaw ku yeeshay Soomaaliya,waxaana Turkidu ay maamulaan xarumaha dhaqaalaha ugu badan Dawlada Kasoo gala sida Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan iyo Dekada weyn Ee Muqdisho.
Qaraxyo Ka Dhacay Banaanka Kaniisad Ku taalla Dalka Indonesia
Amar uu bixiyey Cali Guudlaawe Oo Ka Dhaqan galaya Beled weyne